နယူးမှာ Imperial နီကျောက် | Slabs Tiles | ကောင်တာများ | စျေးနှုန်း | Flodeal
နယူးမှာ Imperial နီကျောက်တဲ့လူကြိုက်များတဲ့နီ အိန္ဒိယကနေကျောက်အမျိုးအစား. ဤသည်ကိုလည်းပတ္တမြားအနီရောင်ကျောက်အဖြစ်လူသိများသည်. ဤသည်ကျောက်ဟာအလွန်ခက်တဲ့ကျောက်သည်နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ချောကြာ. ဒီကျောက်၏နောက်ခံပတ္တမြားအပြာရောင်နောက်ကျောနှင့်တခါတရံတွင်အဝါရောင်ပန်းပွင့်နှင့်အတူရောင်စုံအသွေးသည်အနီရောင်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ခြေလှမ်းများအောင်များအတွက်မကြာခဏအသုံးပြုကျောက်အရောင်ဖြစ်ပါသည်, risers, ကောင်တာများ, နှင့်အခင်း. ဤသည်ကိုလည်း headstone များအတွက်ရေပန်းစားအနီရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါကျောက်အိန္ဒိယ Madhya Pradesh အတွက်ကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်. ဒါကစီမံကိန်းအတွက်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကျောက်တန်ပြန်အရွယ်အစားနှင့် Gangsaw ဖြတ်၏တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ၌ရောင်း. အဆိုပါမှာ Imperial နီမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအဘို့အလွန်အသုံးဝင်သည်, မြို့ရိုးအကြွပ်နဲ့အခင်း. Imperial နီကျောက်များ၏စျေးနှုန်းအရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်, ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့်အပြောင်းအလဲ. နယူးမှာ Imperial နီကျောက်ကောင်တာများ , ပြားနှင့် 24×24, 12×12, 18×18 အုပ်ကြွပ်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူရရှိနိုင်ပါ.
11-18, Sukher စက်မှုဇုန်ဧရိယာ
Udaipur, 313010, အိန္ဒိယ
ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ Imperial နီ, Jhansi နီ, Chhatarpur နီ
ရရှိနိုင်အရွယ်အစား ကျပန်းပြား , tiles, ကောင်တာပြား
အပြီးသတ် အရောင်တင်, Flamed, Lathered
အသုံးပြုခြင်း အခင်း, ကောင်တာထိပ်, မြို့ရိုးကိုကွက်များ
နယူးမှာ Imperial နီကျောက်၏ပြားအရွယ်အစားကိုအောက်ပါအတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရရှိနိုင်ပါသည် :
ပွတ်ကောင်တာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ2&3စင်တီမီတာအကျယ် 65 စင်တီမီတာအထိ x ကိုတာရှည် 180 စင်တီမီတာမှ 300 စင်တီမီတာ
ပွတ် Gangsaw တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ2&3စင်တီမီတာအကျယ် 170 စင်တီမီတာအထိ x ကိုတာရှည် 280 စင်တီမီတာမှ 320 စင်တီမီတာ
နယူးမှာ Imperial နီကျောက်၏ tiles အရွယ်အစားကိုအောက်ပါအတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရရှိနိုင်ပါသည် :
ချိန်ညှိ 610x305x10 မီလီမီတာပွတ် NIRPCT2412 (2412 ကျောက်ကွက်များ×)
ချိန်ညှိ 610x610x12 မီလီမီတာပွတ် NIRPCT2424 (2424 ကျောက်ကွက်များ×)
ချိန်ညှိ 305x305x10 မီလီမီတာပွတ် NIRPCT1212 (1212 ကျောက်ကွက်များ×)
NIRPT60302 ပိုလန်ကွက်များ 60x30x2 စင်တီမီတာ - အသင့်ဖြစ်ပြီလားစတော့အိတ်
NIRPT60402 ပိုလန်ကွက်များ 60x40x2 စင်တီမီတာ - အမိန့်တွင်
NIRPT40402 ပိုလန်ကွက်များ 40x40x2 စင်တီမီတာ - အမိန့်တွင်
NIRPT60602 ပိုလန်ကွက်များ 60x60x2 စင်တီမီတာ - အမိန့်တွင်
ကျနော်တို့၏အထူနှင့်အတူ 18 "x18" ၏အုပ်ကြွပ်နှင့် New မှာ Imperial နီကျောက်အတွက် 400mm x ကို 400mm ချက်တွေကိုအုပ်ကြွပ်လည်းလုပ် 20 မီလီမီတာနှင့် 10 မီလီမီတာ.
27"x108" x2 စင်တီမီတာ
27"x108" X3 စင်တီမီတာ
နယူးမှာ Imperial နီကျောက်ကိုအသုံးပြုခြင်း
ကောင်တာများ: နယူးမှာ Imperial အနီရောင်ကျောက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်နှင့်အဓိကအားဖြင့် flooring အသုံးပြုသည်. နယူးမှာ Imperial အနီရောင်၏ကောင်တာများကအရမ်းတက်ကြွဖြစ်ကြောင်းနှင့်အိမ်ရှင်အများစုအလင်းကိုအရောင်ဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့်အတူဤကျောက်ကိုသုံးပါ. အနီရောင်အရောင်မီးဖိုချောင်တစ်ဦးတက်ကြွကြည့်ပေးသည်.
အခင်း: ဒီကျောက်၏အခင်းလည်းအလွန်ကောင်းကြည့်ရှု. ယေဘုယျအားဖြင့်, ဒီကျောက်၏အုပ်ကြွပ်ကြမ်းပြင်အောင်အတွက်အသုံးပြုကြသည်. ဒါဟာတူညီတဲ့ပန်းပွင့်ပုံစံနဲ့ကိုက်ညီကျောက်ဖြစ်ပါသည်. This isaproject material and very much used for flooring inalarge area. နယူးမှာ Imperial နီကျောက်၏ကြီးမားသော gangsaw ဖြတ်ပြားကြီးမားသောဧရိယာအခင်းအောင်အတွက်လည်းအသုံးပြုကြသည်.
မြို့ရိုးကိုကွက်များ: This granite is very much used in wall tiles as well. ဒီကျောက်များ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုအိမ်ရှင်မြို့ရိုးအကြွပ်နဲ့ရေချိုးခန်းကွက်များအဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့ရှေးခယျြမှုပေးသည်. ယေဘုယျအားဖြင့်, 12'x12 ၏အုပ်ကြွပ်″ အသစ်ကဧကရာဇ်အနီရောင်ကျောက်၏မြို့ရိုးအကြွပ်နဲ့ရေချိုးခန်းအုပ်ကြွပ်အတွက်အသုံးပြုကြသည်. ဤသည်ကျောက်မြို့ရိုးကိုကြွပ်တစ်တက်ကြွကြည့်ပေးသည်.
Backsplash ကွက်များ: နယူးမှာ Imperial နီကျောက်အဖြူကျောက်သို့မဟုတ်အလင်းအရောင်ကျောက်ကောင်တာများနှင့်အတူလှပသောကြည့်. ဤသည်အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်ကျောက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်အတူလူသုံးအများဆုံးအရောင်များတစ်ခုဖြစ်တယ်.
လှေကား: Steps and Risers of this granite are very popular in CIS, အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံများ. ဤသည်အလွန်တက်လှေကားများအပြင်အောင်အတွက်အသုံးပြုသည်.
ဝင်းဒိုးကိုထားလိုက်တော့: High quality polished New Imperial Red Granite is used for making Windows Sills. အရောင်သစ်သား / အဖြူအရောင်ပြတင်းပေါက်နှင့်အတူအလွန်ကောင်းသောကြည့်ရှု.
နယူးမှာ Imperial နီကျောက်ချော
ပိုလနျဒီကျောက်များတွင်အသုံးပြုအထွေထွေပြီးဖြစ်ပါသည်. ဤသည် finish ကိုမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအဘို့အလွန်ကောင်းလှ၏, အခင်း, မြို့ရိုးကိုဝတ်, မြို့ရိုးကိုကွက်များ.
Honed ပြီးတိုင်းကသဘာဝကျောက်လူကြိုက်များနေသည်, ဒီကျောက် Honed Finish လည်းရရှိနိုင်.
Flame နယူးမှာ Imperial နီကျောက်တဲ့လူကြိုက်များတဲ့ finish ကိုဖြစ်ပါတယ်. ဤသည် finish ကိုပြင်ပအခင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်, မြို့ရိုးကိုဝတ်.
နယူးမှာ Imperial နီကျောက်၏ဈေးနှုန်း
သစ်မှာ Imperial နီကျောက်တဲ့ပရီမီယံကျောက်ဖြစ်ပါသည်. မြင့်မားသောစျေးနှုန်းကျောက်မှအလတ်စားအောက်မှာ၌ဤကျောက်၏စျေးနှုန်း. Big Gangsaw ၏အထွေထွေစျေးနှုန်း slabs2စင်တီမီတာအထူတစ်ဝှမ်းဖြစ်ပါသည် 3.5$ အမေရိကန်ဒေါ်လာရန် 5.5$. စျေးနှုန်းအရွယ်အစားနှင့်အထူပေါ်တွင်မူတည်သည်.
နယူးမှာ Imperial နီကျောက်မှ Related ပစ္စည်းများ
5 ပေါ်အခြေခံကာ6မဲ
စက်တင်ဘာလ 10, 2018 |0မှတ်ချက်များ
စက်တင်ဘာလ 8, 2018 |0မှတ်ချက်များ
ရှေးဟောင်း White ကကျောက်
ဇူလိုင်လ 16, 2018 |0မှတ်ချက်များ
ဇွန်လ 3rd, 2018